लैंगिक महिलाहरुमाथि प्रहरीको ज्यादति,राज्यले किन गर्छ निच स्तरको व्यवहार? - Sawal Nepal
काठमाडौँ सवालनेपाल २०७७ माघ ११, १४:१२
‘लाज !मलाई लाग्दैन।कुट्दा यी पनि मान्छे हुन् भनेर उनीहरुले लाज मानेनन्। कहाँ–कहाँ चोट लागेन? सबै चोटहरु देखाउँछु।’यसो भन्दै गर्दा बबिता मैनालीले लगाएको कालो ओभरकोट कुम तल झार्दै पाखुरा र छातीमा लागेको चोट देखाइन् । पाखुरामा लौरीका डाम छन् ।घाँटी तल निल डाम र खाता बस्दै गरेका घाउ छन् ।२९ वर्षकी बबिता अहिले काठमाडौँ प्रहरी परिसर सोह्रखुट्टेको हिरासतमा छिन् । उनीसहित १६ जना पारलैंगिक महिला (ट्रान्सविमन) लाई गएको बिहीबार (माघ ८ गते) बेलुका प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । त्यसमध्ये बबितासहित चार पारलैंगिक महिला सोह्रखुट्टे प्रहरी बिटमा छन् ।बबिताले लुगा तल झारेर चोट देखाउँदै गर्दा उनलाई ‘लाज’ भन्दा आफूले भोग्नु परेको पीडाको आकार देखिनु जरुरी लाग्यो ।दुखिरहेको चोट देखाउँदै गर्दा महिला प्रहरीले ‘अनुशासन’ मा बस्न निर्देशन दिइन् अलि ‘कडा’ स्वरमा । बबिताले ओभरकोट लगाइन् ।शनिबार अपरान्ह सवा ४ बजेतिर सोह्रखुट्टे प्रहरी बिटको हिरासत पुग्दा बबितासहित चारजना फलामे डण्डीको बार पारी भूईँमा प्लास्टिकको म्याट त्यसमाथि पातलो बिस्तरामा बसेका थिए।बबिताले आफ्नो परिचय दिइन् र बिहीबार बेलुका भएको घटनाको विवरण सुनाइन् ।खाएको कुटाइ र गाली सुनाउँदै गर्दा बबितामा आक्रोश र नैराश्य एकसाथ देखिन्थ्यो । ‘आमा गाली दिए । कपाल भुत्ले । बुटले हाने । लौरी बजारे । शरीर सबै दुखेको छ ।पशु जस्तो व्यवहार भयो । चौपायालाई पनि कुट्दैनन् यसरी,यस्तो व्यवहार गरिँदैन जस्तो हामी माथि भयो।’
बबिता बोल्दै गर्दा अगाडि फलामे डण्डीको बारतिर आइन् आरती न्यौपाने । बिहीबार बेलुका काठमाडौँको मित्रनगरबाट पक्राउ पर्ने १६ जना पारलैंगिक महिला मध्येकी एक हुन् आरती ।‘बिजी मल (काठमाडौँ–२६ गोंगबु, मित्रनगर) अगाडि हामी साथीहरु उभिरहेका थियौँ । दिनभर चिसो भएको थियो । बेलुका ६ बजेतिर हामी फिल्म हेर्न जाने भनेर त्यहाँ भेला हुँदै थियौँ । पछाडिबाट आएकाहरुले झ्यापझुप्पै कठालोमा समाते । चोर, डाँका वा अपराधी पो हुन् कि जस्तो लाग्यो ।’२४ वर्षकी आरतीले भनिन्, ‘सिभिल ड्रेसमा आएका प्रहरी हुन् भन्ने पनि लागेन पहिले त । पछि अरु पोशाकमा रहेका प्रहरी पनि आएपछि पक्राउ गर्न आएका रैछन् भन्ने भयो । अलि ढुक्क भयो, धन्न गुण्डा रैनछन् भन्ने लाग्यो । तर त्यसपछि गरिएको बेइजती र कुटाइ गुण्डा हुन् कि भन्ने भय भन्दा भयानक थियो ।’आफूहरु प्रहरीले भने जस्तो ‘अवाञ्छित’ गतिविधिमा संलग्न नभएको र भेला भएर फिल्म हेर्न जाने तयारी हुँदै गर्दा पक्राउ पूर्जी पनि नदिई पक्राउ गरिएको आरतीले बताइन्।‘कठालोमा समाते, हतकडी लगाए, भ्यानमा हाले । भ्यानमा एक महिला प्रहरी थिइन्, उनले हामीमाथि सारै नराम्रो व्यवहार गरिन्’, आरतीले भनिन्, ‘काम गर्नको अल्छीले केटी बनेर यौन व्यवसायमा लागेका केटाहरु हुन् भन्दै ती महिला प्रहरीले कपाल भुतलिन् । लात्ताले हानिन् । मुखमा थुकिन्।’
आफूहरु ट्रान्सवुमन (पारलैंगिक महिला) रहेको र शारीरिक परिवर्तनका लागि हर्मोनहरु खाइरहेको तथा अरु उपचारहरु पनि गरेको जानकारी गराएको तर प्रहरीबाट दुर्व्यवहार नरोकिएको आरतीले बताइन् ।‘यिनीहरुको कपाल त नक्कली (विग) हो भन्दै भुतल्दा सारै दुख्यो, अहिलेसम्म कपाल दुखिरहेको छ’, आरतीले भन्दै गइन्, ‘अनुहारमै थुकिन् । छाडा पशु जस्तै गरिन् हामीलाई । आमाको गाली गर्दा नराम्रो लाग्यो झन् ।’‘आमाले पनि यस्तै गर्छ होला र त यिनीहरु यस्ता भएका’ भन्दै महिला प्रहरीले गाली गरेको आरती, बबितासँगै सञ्जु र प्राप्तिले बताए । २० वर्षकी सञ्जु लामा र २४ वर्षकी प्राप्ती ठकुरी पनि सोह्रखुट्टे प्रहरी बिटको हिरासतमा छन् ।सञ्जुको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ । टाँका लगाइएको घाउलाई ब्यान्डेजले छोपिएको छ । उनी अस्पतालमा हैन, टाउकोमा लागेको गम्भीर चोटसहित हिरासतमा छिन् जाडोमा सीमित लुगा र ओढ्ने ओछ्याउनेको सहारामा ।
मित्रनगरबाट पक्राउ परेका उनीहरुलाई सुरुमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्क लगिएको थियो । साढे ६ बजेतिर त्यहाँ लगेर आफूहरुमाथि कुटपिट भएको सञ्जुले बताइन् ।‘हामीले किन पक्राउ गरेको भनेर सोध्यौँ । पक्राउ पूर्जी माग्यौँ । उनीहरुले दिएनन् । पक्राउ गर्दा त कारण खुलाइन्छ नि हैन?’ ब्यान्डेज गरिएको टाउको समात्दै सञ्जुले भनिन्, ‘हामी कराउन थाल्यौँ, उनीहरुले कुट्न थाले । लात्ती हाने । बन्दुकको नालले हाने । लौरीले होने ।’ टाउकोमा गम्भीर चोट त्यही कुटाइले लागेको बताएकी सञ्जुले पाखुरा, छातीसहित शरीरका अरु भागमा चोट र निलडाम रहेको बताइन् ।आरतीका अनुसार उनीहरु प्रहरीमाथि जाइ लागेका थिएनन्। उनले भनिन्, ‘उनीहरुले पूर्जी नदिइ, कारण नबताइ पक्राउ गरे । हामीले कारण माग्यौँ । उनीहरुले कुटे । कुट्दा थापिएर त बस्दैन नि रोक्न खोजीहाल्छ नि । त्यही कुटाई रोक्ने बेला सिसा फुट्यो । प्रहरीले त्यो सिसा हामीले उनीहरुलाई कुट्ने क्रममा फुटाएको भनेर गलत प्रचार गरिरहेको छ ।’त्यसपछि आफूहरुलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज लगिएको आरतीले बताइन् । महानगरीय प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्कबाट महाराजगञ्ज लैजाने क्रममा आफूहरुमाथि थप कुटपिट भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
आरतीले भनिन्, ‘तिमीहरुलाई चौकी भित्र पो धेरै कुट्न मिल्दैन, बाहिर निकालेर भाग्न खोजे भन्दै कुट्न त मिल्छ नि भन्दै चुटे । लगाएका लुगा पनि च्याते, नाङ्गै पारे । भ्यानमा पनि कुट्दै, तथानाम गाली गर्दै लगे ।’महाराजगञ्जमा सबैलाई लगेपछि राति चार–चार जनाको दरमा चार प्रहरी चौकीमा आफूहरुलाई विभाजन गरेर हिरासतमा राखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।बिहीबार राति आरती, सञ्जु, बबिता र प्राप्तीलाई आफूहरुको चौकीमा ल्याइएको प्रहरी प्रभाव सोह्रखुट्टेका प्रहरी अधिकारीले बताए ।सोह्रखुट्टेपछि शनिबार चाबहिलस्थित गंगाहिटी प्रहरी वृत्त जाँदा त्यहाँ रहेका चारजनाको अवस्था ‘बिजोग’ देखियो । चारैजनासँग न्यानो लुगा थिएन । एक युवतीको स्वीटरको गला च्यातिएको थियो।‘पक्राउ तथा त्यसपछिको कुटपिटको क्रममा लुगा च्यातियो’ काम्दै गरेकी उनले भनिन् । अर्की युवतीले पातलो कुर्तामाथि मजेत्रो ओढेकी थिइन् । अरु दुईजनासँग पनि लुगा थिएनन् न्यानो हुने गरी।लागेको चोट दुखिरहेको भए पनि आफूहरुले औषधि नपाएको उनीहरुको गुनासो थियो । उनीहरुको पनि छाती, पाखुरा, ढाडसहित शरीरका विभिन्न भागमा चोट तथा निल डाम छन् ।सोह्रखुट्टे र गंगाहिटी जस्तै नयाँ बसपार्क र महाराजगञ्जमा चार–चारजना पारलैंगिक महिला छन्।
१९ वर्षकी मुस्कान गुरुङ्ग पनि पक्राउ परेकी थिइन् । तर उनी भाग्न सफल भइन् । मित्रनगरबाट पक्राउ गरेर नयाँ बसपार्कको चौकीमा लगिएकी उनी त्यहाँबाट महाराजगञ्ज लैजान निकाल्ने क्रममा प्रहरी घेराबाट भागेकी हुन्।उनको छाती र पाखुरामा चोट लागेको छ । तर फेरि पक्राउ पर्ने डरले उनी अस्पताल जान सकिनन् । ‘घरमै साथीहरुले घाउ सफा गरेर ब्यान्डेज गरिदिए’ मुस्कानले भनिन्, ‘नयाँ बसपार्क चौकीबाट हामीलाई भ्यानमा हालेर महाराजगञ्ज लैजान थालेको थियो । त्यहि बेला म भाग्न सफल भएँ । धन्नँ बाँचे । साथीहरुलाई त भ्यानमा झन कुटेछन् । भिडियो तथा फोटो हेर्दा मलाई लागेको चोट त केही होइन जस्तो भयो ।’प्रहरीले आरोप लगाए जस्तो आफूहरु सो दिन ‘अवाञ्छित’ गतिविधिमा संलग्न नभएको मुस्कानले बताइन् ।‘एक्कासी पक्राउ गरे । म त छाँगाबाट खसेको जस्तै भएँ । सादा पोसाकमा मात्रै देख्दा डर लागेको थियो । पछि बर्दीका प्रहरी पनि देखेपछि केही राहत मिल्यो । तर पक्राउ पूर्जी दिएनन् । भ्यानमा लगेर थुक्ने, कपाल लुछ्ने तथा कुट्न थाले’ उनले भनिन्, ‘चौकी लगेर पनि कुटेका हुन् । अझ बाहिर महाराजगञ्ज लैजाने क्रममा बाहिर निकाल्दै गर्दा लागुऔषध केसमा फसाइ दिन्छौँ भन्दै धम्क्याए ।’
मनोवैज्ञानिक रुपमा अस्थिर देखिएकी मुस्कानलाई आफू फेरि पक्राउ पर्छु कि भन्ने डर छ । तर अपराध के भन्ने थाहा छैन । ‘हामीलाई यौन पेशामा संलग्न हुन बाध्य पारिएको हो । काम पाए गर्न सक्छौँ नि । कसलाई मन हुन्छ र यस्तो गर्ने, तर त्यो दिन त हामीले त्यस्तो केही गरेकै थिएनौँ ।’मुस्कानलाई चलचित्रका गीतमा नृत्य गर्ने मन छ । ‘राम्रो नाच्छु जस्तो लाग्छ । फिल्मका गीतमा नाच्न पाए हुन्थ्यो । तर खै यसरी कुटाइ खाइन्छ । पक्राउ परिन्छ कि भन्ने डर छ, के होला र ?’ यसो भन्दै गर्दा उनी उत्साहित हुँदै निराश देखिइन् ।बिहीबार बेलुका उनी हतास र रगत बगिरहेको अवस्थामा आएको साथमा रहेकी साथीले बताइन् (जसले आफ्नो परिचय खुलाउन चाहिनन्) । अहिले पनि मुस्कान तर्सिने गरेको र आफूहरुले सम्झाउने प्रयास गरिरहेको उनले बताइन् ।
भाग्न सफल भएकी तथा हिरासतमै रहेकाहरुको भनाई एउटै थियो घटनाबारे । तर प्रहरीको दाबी भने फरक छ ।बिहीबार बेलुका भएको घटनाको तस्बिर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरी ज्यादती र ‘बर्बरता’ को आलोचना र निन्दा भयो । त्यसपछि शुक्रबार प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफूहरुमाथि हातपात भएपछि पक्राउ गरिएको दाबी गरिएको छ ।शुक्रबार प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काठमाडौँमा प्रहरीमाथि नै हातपात गर्ने यौनिक तथा अल्पसङ्ख्याक समुदायका १६ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।’उनीहरूलाई अभद्र व्यवहारमा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले जनाएको छ । सर्वसाधारणलाई हैरानी दिएको गुनासो आएपछि महानगरीय प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्कमा उनीहरूलाई सोधपुछका लागि ल्याइएकोमा प्रहरी टोलीमाथि नै हातपात गरेपछि पक्राउ गरिएको दाबी प्रहरीको छ ।तर पक्राउ परेकाहरुको अवस्थाहरुले प्रहरीको दाबी भन्दा विपरित अवस्था देखाउँछ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एलजिबिटिआइक्यू प्लस–लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेण्डर, इन्टर सेक्स, क्वेयर) समुदायका व्यक्तिमाथि प्रशासन तथा सामुदायिक तहमा फरक व्यवहार र कतिपय अवस्थामा दुर्व्यवहारका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।त्यसमाथि पारलैंगिक महिला (ट्रान्सवुमन) माथि सार्वजनिक स्थलमा दुर्व्यवहार तथा प्रहरी प्रशासनबाटै ज्यादतीका घटना बारम्बार हुने गरेका छन् ।विश्वव्यापी रुपमा भएका अध्ययनहरुले विशेषगरि ट्रान्सजेण्डर महिलाहरु दुर्व्यवहारको निशानामा पर्ने गरेको देखाउँछ । त्यसको प्रभाव मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा गम्भीर र दीर्घ रुपमा पर्ने गरेको छ ।ह्युमन राइट्स वाचले बारम्बार ट्रान्सजेण्डर (विशेषगरि महिला) शारीरिक तथा यौन दुर्व्यवहारको निशानामा पर्ने गरेको भन्दै विगतदेखि नै सचेत गराउँदै आएको छ । सुरक्षाको जिम्मा पाएको प्रहरी प्रशासनबाट नै पारलैंगिक महिलामाथि हुने ज्यादतीका घटना हुने गरेको भन्दै मानवअधिकारवादीले निन्दा गर्ने गरेका छन् ।बिहीबार पारलैंगिक महिलामाथि भएको प्रहरी ज्यादतीको विरोधमा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता तथा मानवअधिकारको वकालत गर्नेहरु लागेका छन् ।यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सुरक्षा तथा अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएको निल हिरा समाजले सो घटनाविरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा प्रहरीमै पनि उजुरी दिएको छ ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धान महाशाखाका उपसचिव लोकनाथ बास्तोलाका अनुसार आयोगमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिमाथि हुने गरेका दुर्व्यवहार तथा मानवअधिकार हननका उजुरी पर्ने गरेको र त्यसमा धेरै ट्रान्सजेण्डर महिला तथा पुरुष बढि निशानामा पर्ने गरेको देखिन्छ।